Exynos 9825: processor nke Galaxy Note 10 | Akụkọ akụrụngwa
Exynos 9825: processor nke Galaxy Note 10
Eder Esteban | | Noticias, Ihe ngosi
Ihe ngosi 10 na 10 nke Galaxy Galaxy bu ihe ndi ozoAnyị amaraworị ihe Samsung na-ahapụ anyị na njedebe ọhụrụ ya. Thedị Korea ewepụtala anyị n'ụtụtụ a na ngwa nhazi ọhụụ dị elu, nke ziri ezi na ekwentị ndị a. Ọ bụ Exynos 9825, nke enwere otutu onu ogugu n'izu ndi a, ma ugbu a o bu ochichi. Ihe nhazi ohuru maka njedebe di elu.
Ihe nkịtị bụ na Samsung na-eji otu nhazi ahụ eme ihe n’ezinụlọ ya abụọ elu-ọgwụgwụ. Agbanyeghị na nke a, site na mwepụta nke 10 Galaxy Note, akara Korea na-emebi usoro a. Ha na-ahapụrụ anyị Exynos 9825, nke anyị nwere ike ịhụ dị ka ụdị ndozi nke processor anyị zutere na February.
Ọ bụ ihe nhazi dị mkpa maka onye nrụpụta Korea, dị ka ọ bụ nke mbụ n'ime usoro ya ka arụpụtara na 7 nm. Yabụ na ọ bụ mmụba dị mkpa maka ụlọ ọrụ ahụ, nke enweghị mgbagha na-achọ ịdị elu nke ndị asọmpi ya. Usoro nrụpụta ọhụụ a abụrụla otu mgbanwe mgbanwe pụtara ìhè, yana nke ga - enyere ihe nhazi ahụ aka. Anyị na-agwa gị nkọwa ya zuru ezu n'okpuru.
Exynos 9825 Nkọwapụta
Anyị na-eguzo n'ihu a ike ike processor na mma arụmọrụ. Na mgbakwunye, ekwenyela ya na ọ ga-adaba na 5G. Samsung nyere ohere nke ịgbakwunye modem ọhụrụ ya na Exynos 9825 a, ka o wee nwee ndakọrịta a. Ọ bụghị ihe ijuanya, n'ihi na otu n'ime ekwentị nwere nkwado 5G. Ndị a bụ nkọwa nke nhazi a nke ika Korea:
Usoro imepụta: 7 nm (EUV)
CPU: 2 M4 cores kụrụ na 2,7 GHz + 2 Cortex A75 cores kụrụ na 2,4 GHz + 4 Cortex A55 cores clocked na 1,95 GHz
GPU: 12-isi Mali G76
Ngosipụta ngosipụta ngosipụta WQUXGA (3840 × 2400), 4K UHD (4096 × 2160)
LPDDR4X RAM na Nchekwa UFS 3.0, UFS 2.1
Igwefoto: N'azụ 22MP + Front 22 MP na nkwado maka ihe mmetụta 16 + 16 MP
Ndekọ vidiyo: Ruo 8K na 30 fps, 4K UHD na 150 fps 10-bit HEVC (H.265), Ngbanwe na ngbanwe na 10-bit HEVC (H.265), H.264 na VP9
Ngwakọta njikọ 4G, LTE Cat.20, 8CA
Na-akwado 5G n'iji Samsung Exynos 5100 modem
Pụrụ ịhụ na o nwere ọtụtụ ihe jikọrọ ya na ihe nhazi anyị na-ahụ na Galaxy S10. Samsung edebewo ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị mkpa na nke a, mana ha hapụrụ anyị na mgbanwe, nke mere na ọ bụ ihe nhazi zuru oke ma sie ike na nke a. Ọ bụ ezie na imirikiti ihe ndị a Exynos 9825 kwesịrị inwe ekele maka ịmepụtara ha na 7 nm. Ọ ga-ekwe ka ihe atụ obere ike oriri, maka ịrụ ọrụ nke ọma karịa ngwaọrụ. Ihe ndị ọrụ nwere nke ọ bụla n'ime ihe ndị a dị na Galaxy Note 10 kwesịrị ịchọpụta mgbe ha nwere ha.
Dị ka ọ dị na ahịa, Exynos 9825 na-ahapụ anyị NPU, a unit raara nye niile keakamere ọgụgụ isi eme na processor. Ọ bụ ihe achọrọ nke dị mkpa na njedebe dị elu, na ọkara na gam akporo, yabụ akara Korea na-ahapụ anyị otu na nke a. Enweghi otutu nkọwa banyere ya, mana echere na ọ ga-adị ka nke anyị na-ahụ na nhazi nke Galaxy S10. Maka ndị ọzọ, anyị nwere ike ịhụ na ọtụtụ nkọwa akọwapụtaghị nnukwu mmali na mma.
Otu n'ime akụkụ kachasị mkpa na nhazi a bụ na ọ nwere ohere ịnweta 5G. Samsung egosila ya na modem ọhụrụ ya, Exynos 5100. Ọ bụ modem nhọrọ, nke enwere ike ịgbakwunye ma ọ bụ na nhazi ahụ. Mgbe ejiri ya, Exynos 9825 na 5G dabara. Ya mere, ọ bụ ọrụ dị oke mkpa, nke gosipụtara na nsụgharị 5G nke Galaxy Note 10 +. N'ihi ya, ọ ga-abụ ekwentị dakọtara ọhụrụ, nke ga-abata na Spain n'ime izu ole na ole, na Ọgọstụ 23, dịka ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya si kwuo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Exynos 9825: processor nke Galaxy Note 10
Galaxy Watch na-arụ ọrụ 2: smartwatch ọhụrụ nke Samsung
Nke a bụ Samsung Galaxy Note 10 na Rịba ama 10 +, ihe niile ịchọrọ ịma